AsteroidOS iyo nyowani smartwatch inoshanda sisitimu debuts paGitHub | Linux Vakapindwa muropa
Isu tinogara tichiedza kufukidza ese matsva mapurojekiti uye uyu mumwe muenzaniso weizvi. Mune ane mukurumbira GitHub peji kune imwezve chirongwa pakati pevakawanda. Icho, zviri pachena, yakavhurwa sosi purojekiti yakavakirwa paLinux uye ino nguva inovavarira kufukidza chikamu icho chichiri kutora, icho chewatchwatches kana smartwatch. Zvikurukuru, ihurongwa hwekushandisa hwerudzi urwu rwezvigadzirwa zvinopfeka uye kuti zvinokwanisika kutaura nezvazvo munguva pfupi iri kutevera.
Inodanwa asteroids uye zvakagadzirwa nemudzidzi wechiFrench kuti akwanise kuurayiwa mumhando dzakasiyana dzeemawachiwatch izvo zvino zvinopa Google yeGoogle. Mudzidzi anga achishanda pachirongwa kwemakore maviri kuti azviparadzire paGitHub, apo patinoona kodhi uye tobatisisa kana tichida. Sezvakataurwa, kurudziro yavo ndeyekuti vazhinji vashandisi vanodavira kuti mamwe ehurongwa huripo hwekudyara hahuvagutse.
Iko kusagutsikana, sekureva kwemusiki, kunobva mukushandisa zvisirizvo kweahardware yavanogadzira kana kushomeka kwekuchengeteka. Ipapo akabva aziva kuti chikuva chakavhurika chaidikanwa pamidziyo iyi, ichishanda pasystem irimo alpha chikamu. Naizvozvo, ichiri chirongwa chisina kusimba maererano nebudiriro uye chinongova nezvakakosha zvekushandisa senge khalenda kuronga zviitiko, nyore Calculator, system yemimhanzi, uye wachi ine stopwatch, timer, nezvimwe.
AsteroidOS inogona kumhanyiswa mhando dzakasiyana dzema smartwatch senge dzimwe shanduro dzeGG G, ASUS ZenWatch, Sony Smartwatch, nezvimwe. Kunyangwe zvisiri zvese zvinoshanda zvinoshanda, semuenzaniso, iyo bluetooth system inoshanda chete panguva ino mumhando dze LG. Uye kubva pano isu tinotarisira kuti kufambira mberi kunoenderera mberi uye kuti budiriro inovandudzika, kunyangwe isu tichiziva kuti vamwe vakaedza vakatadza, saka ihondo yekukwira zvishoma ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » AsteroidOS iyo nyowani smartwatch inoshanda sisitimu inotanga kuGitHub
SUSE inosangana mukati Windows 10